घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू अर्जेन्टिना फुटबल खेलाडीहरू लियोनेल मेसी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
लियोनेल मेसीको हाम्रो जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, आमा बुबा, पत्नी, बच्चाहरू, नेट वर्थ, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा हामी तपाईंलाई लिओको स्टारडमको यात्रामा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू प्रदान गर्दछौं। Lifebogger आफ्नो शुरुआती दिनहरु बाट शुरू हुन्छ जब उनी प्रख्यात भए। तपाइँको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, यहाँ ग्यालरी उठाउनको लागि पालना छ - लिओनेल मेसीको बायोको एक सारांश।
लियोनेल मेसीको जीवनी।
हो, तपाईं र मलाई थाहा छ प्रशंसकहरू लेजेन्डरीमा उहाँलाई तुलना गर्छन् क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मनपर्ने शीर्षक मा - फुटबलमा GOAT को हो?। प्रशंसकको बाबजुद, हामीले महसुस गरेका थियौं केहीले मात्र लिओनेल मेसीको जीवन कहानीको विस्तृत तर संक्षिप्त संस्करण देखेका छन्। हामीसँग यो सबै तपाईंको लागि पकाइएको छ। अब, थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
लियोनेल मेसी बाल्यकाल कहानी:
जीवनी सुरुवाहरूको लागि, उपनाम - फुटबलको GOAT - उनको मनपर्ने मोनिकर रहन्छ। लियोनेल मेसीको जन्म १ 24 .1987 जून २ XNUMX तारिखमा उनकी आमा सेलिआ मारिया कुचिटिनी र बुबा जर्ज होरासिओ मेसी अर्जेन्टिनाको रोजारियो शहरमा भएको थियो।
लियोनेल मेसीका अभिभावकलाई भेट्नुहोस्। हामी उनलाई एउटा बल समातेर उसको आमाको छेउमा बसिरहेको देख्छौं। साथै, उनको सानो बहिनी मारिया सोल। उनी ड्याडीको पछाडि सान्त्वना पाइन्।
यदि तपाइँलाई थाँहा थिएन, लियोनेल मेसी उनका बुबा, स्टिल कारखाना प्रबन्धक, र मम, जो एक पटक अर्जेन्टिनामा चुम्बक निर्माण कार्यशालामा काम गर्थे, मध्ये जन्मेका चार मध्ये तीन जना छोरा हुन्।
ला पुल्गा मध्य अर्जेन्टिना प्रान्तमा सान्ता फेको सबैभन्दा ठूलो शहर रोजारियोमा हुर्केका थिए। उनले आफ्नो शुरुआती वर्षहरू प्रायः आफ्ना तीन भाईबहिनीसँगै बिताए। आफ्नो रगत रिश्तेदारहरूको बारेमा कुरा गर्दै, मेस्सीको जेठो दाइ रोड्रिगो हुनुहुन्छ। मटियास मेस उनको तत्काल वरिष्ठ छन्। अन्तमा, उनकी कान्छी बहिनी मारिया सोल मेसी हो।
लिओनेल मेसीका भाइबहिनीहरू भेट्नुहोस् - रोड्रिगो मेस्सी (धेरै दायाँ), मटियास मेस्सी (मध्य) र मारिया सोल मेसी (उनकी एक मात्र बहिनी)।
लियोनेल मेसी परिवार पृष्ठभूमि:
बार्सिलोना किंवदन्ती एक तंग बुनाई, फुटबल प्रेम गर्ने घरबाट आयो। लागतको बाँच्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा, जोर्गे र सेलिया मारिया एक पटक १ 1980 .० को दशकको अन्ततिर अर्जेन्टिनामा ठूलो जमिनको कारण अभावको सामना गरिरहेका थिए।
त्यसबेला, लियोनेलको आमा र बुबाले मुश्किलले उनीहरूको मध्यम-आय परिवारलाई सहयोग गर्न सक्थे।
मेस्सीको जन्म भएको केही वर्षपछि दक्षिण अमेरिकी देश आर्थिक पतनको छेउमा थियो। यो अर्जेन्टिनाको payण तिर्न असमर्थताको कारणले हो। यस कारणले गर्दा, हाइपरइन्फ्लेसन, पेसोको अवमूल्यन र दंगा दिनको क्रम बन्न पुग्यो।
लियोनेल मेस्सीको परिवार यस आर्थिक संकटको शिकार भएका थिए जसले करीव सबै मध्यमवर्गीय घरपरिवारलाई हल्लायो। सत्य यो हो कि, जर्ज र सेलिया मारियाले million० लाख अन्य अर्जेन्टिनासँग काम गरे।
लियोनेल मेसी परिवार मूल:
र सबैभन्दा पहिला, आणविक फ्ल्या एक अर्जेन्टिना भन्दा युरोपेली हो। यसको कारण हो कि उनका ग्रानिजहरू - एन्टोनियो, सेलिया-ओलिभेर, रोजा मारिया र युसेबियो दक्षिण अमेरिकी देशका होइनन्।
लियोनेल मेसी परिवार मूल।
लियोनेल मेस्सी बुबाको पक्षबाट इटालियन र स्पेनिस मूलका हुन् - आफ्ना युवती हजुरबा हजुरआमा - युसेबियो मेस्सी र रोजा मारिया पेरेज। हजुरआमा र हजुरबुबा एक पटक अर्जेन्टिनामा आएका आप्रवासी थिए। तिनीहरूको पारिवारिक जरा इटाली र क्याटालोनियाको उत्तरी मध्य एड्रियाटिक मार्चे क्षेत्रमा पत्ता लगाइएको छ।
लियोको आमाको छेउछाउ मात्र उसको मातृ हजुरबा हजुरआमा - एन्टोनियो र सेलिया ओलिभियरा कुचिट्टिनी थियो।
लियोनेल मेसी अनटोल्ड फुटबल कहानी:
एक कडा बुनिएको, फुटबल प्रेम गर्ने परिवारमा हुर्केका, ला पुल्गाले सानै उमेरदेखि नै फुटबल खेल्ने इच्छा जगायो। त्यतिखेर, उहाँ आफ्ना ठूला दाइहरू, रोड्रिगो र मताससँग निरन्तर खेल्नुहुन्थ्यो। उनका काचेज, मैक्सिमिलियानो र इमानुएल बियानुकी पनि (जो पछि पेशेवर फुटबलर भए) उनीसँग खेले।
लियोनेल मेसीको प्रतिभा कसले पत्ता लगाए?
यो जवान चार बर्षको थियो जब उसको हजुरआमाले उसलाई एक फुटबल स्टार को निर्माण देखी। Celia Oliveira Cuccittini साना केटा मा एक अतुलनीय गन्तव्य फेला। यो केहि बेमिसाल थियो तपाईको जेठो दाइ, रोड्रिगो र मटास, उसलाई बल कसरी लात हाल्ने सिकाउनुभयो।
यस समयमा, सारा विश्वमा केवल एउटी महिलालाई थाहा थियो कि यो सानो केटो फुटबलको GOAT हुने छ।
परिवारका सबैमा सेलीया ओलिभियरा कुचिटिनी एकमात्र थिइन, जो त्यस समय मेस्सीलाई फुटबलर बन्न चाहन्थे। यसको लागि, उनले व्यक्तिगत रूपमा बच्चालाई आफ्नो पहिलो फुटबल प्रशिक्षण सत्रमा ग्रान्डोली स्थानीय फुटबल क्लबमा लगे। त्यहाँ हुँदा, सेलिआ ओलिभियरा कुचिटिनीले आफ्ना नातिलाई यी शब्दहरू दिए:
"LIONEL, ...। एक दिन, तपाईं विश्वमा सर्वश्रेष्ठ फुटबल खेलाडी हुनुहुनेछ, "
हजुरआमा सेलिया ओलिभिराको समर्थन एकदम ठूलो थियो। उनले मेस्सीका अभिभावकलाई उनको पहिलो जोडी फुटबल बुट किन्न प्रोत्साहित गरेकी थिइनन् तर स्थानीय क्लबका तत्कालीन कोचलाई उनको नातिलाई खेल टोलीमा सामेल गर्न जिस्काएकी थिइन।
मेस्सी र उनको परिवार एक पटक म्याच हेर्न आएका थिए जहाँ केटाहरूको समूह - जुन उसको उमेर भन्दा अलि माथि थियो। उनका सम्पूर्ण परिवार पनि रोड्रिगो र म्याटियास हेर्न आएका थिए, जसले लियोनेल तर न्युट लायोनेल पनि खेले।
त्यो खेलमा, कोच साल्भाडोर अपारीसियोले आफू एक खेलाडी छोटो भएको याद गरे। आफ्नो टिम पूरा गर्न, उनले एक सानो देखिने लियो मेस्सीलाई आफ्ना ठूला केटाहरूसँग खेल्न आउन भने। आफ्ना बाबुआमाबाट धेरै मनाए पछि ला पुल्गा सामेल भए।
पहिलो पटक बल लियोनेलमा आए, उनले त्यसलाई यताउता जान दिए। दोस्रो पटक, उनले यसलाई नियन्त्रण गरे र पिचमा दगुर्न शुरू गरे, हरेकलाई पछाडि हिर्काउँदै - जो उनका ठूला दाजुहरू।
प्रतिभाको त्यो क्षणबाट, उहाँ तुरून्त साल्भाडोर अपारीसियोको टीमको एक हिस्सा बन्नुभयो। उनको पहिलो प्रशिक्षकको लागि काम गर्दै, लियोनेल आफ्नो पक्षलाई पहिलो ट्रफी जित्न सहयोग पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले। हेर, आणविक फ्ल्या आफ्नो नामको पहिलो सम्मान राख्दै।
केवल उसको सानो खुट्टा हेर्नुहोस् - विशेष गरी दागको साथ दाग। सत्य यो हो, मेस्सीले चार बर्षको उमेरदेखि नै फुटबलको लागि उत्साहित पारेको छ।
नेवेलको पुरानो केटाहरूको साथ प्रारम्भिक क्यारियर:
अलौकिक क्षमता भएका कसैको रूपमा वर्णन गरिएको, कोच अपार्टिकियोले मेस्सीलाई एउटा ठूलो एकेडेमीमा लैजानको कसम खान्छ ताकि उसले स्थानीय बच्चाबाट एक कथा बनाउन सक्दछ। त्यस समयमा, लियोनेलका बुबा, जोर्गे, आफ्नो प्रशिक्षक बन्न स्वेच्छाले सबै थिए - सबै छोरालाई खेतीपाती हेरचाह प्रदान गर्ने नाममा।
नेवेलको ओल्ड ब्वाईजको आजीवन समर्थक - आफ्नो परिवारसँगै - मेस्सी रोजारियो क्लबमा सामेल भए जब उनी छ वर्षको थिए। दुःखको कुरा, भर्खरै उनी नेवेलसँग बस्न खोज्दै थिए, उनकी हजुरआमा सेलिआ ओलिभिएरा कुचिट्टिनीको मृत्यु भयो। नबिर्सनुहोस्, यो केटीले आफ्नो प्रतिभा पत्ता लगायो।
दुःखको साथ सामना गर्दै - उनको हजुरआमाको मृत्यु:
मेस्सीलाई उसको फुटबलमा जानको निम्ति संघर्ष गर्ने कसैको ब्यक्तिसँग सम्झौता गर्न गाह्रो थियो। उनको मृत्यु उनको एघारौं जन्मदिन भन्दा पहिले भएको थियो। घाटा भएदेखि, अर्जेन्टिनाले आफ्ना लक्ष्यहरू मनाउन थाल्यो आकाशतिर हेरेर - सबै हजुरआमालाई श्रद्धांजलि।
छ वर्षसम्म ऊ नभेल्सको लागि खेले, उनले लगभग almost०० गोल गरे। वास्तवमा, लियोनेल केटाहरूको समूहको सदस्य थिए जसलाई "The Machines of '500" भनिन्छ। यो निकट अपराजेय युवा पक्ष हो जसको उपनाम तिनीहरूको जन्म वर्षबाट आएको थियो - १ 87 1987।
लिओनेल कति सानो थियो हेर्नुहोस्। तपाईले उसलाई 87 XNUMX को मेशिन बीच सायद याद गर्नुहुनेछ।
भीडको नियमित मनोरन्जन गर्नको लागि फ्यानहरूलाई केटाहरूको यो समूह थाहा थियो। उनीहरूको पहिलो टोलीको घर खेलको आधा समयको दौरान बल ट्रिकहरू प्रदर्शन गरे। मिति सम्म, 87 the को मेशिन अझै पनी एक व्हाट्सएप समुहको रखरखाव गर्दछ र लियोनेललाई आफ्नो नेताको रूपमा देख्छ।
पढ्नुहोस् मौरी Icardi बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
लियोनेल मेसी रोग कहानी:
उनको हजुरआमाको मृत्यु पछि, लियोले बढ्न छाडे। त्यस समयमा, एक पेशेवर खेलाडीको रूपमा युवाको भविष्य जोखिममा पर्ने भयो।
वास्तवमा, उसको परिवारका सबै निएवलको कोचिंग स्टाफ लगायत उनको स्टन्ट ग्रोथको बारेमा चिन्तित भए। उस्तै समूहका साथीहरूसँग तुलना गर्दा उनीहरू लिओनेललाई बौने जस्तै देखिन्थे।
विकास हर्मोन अभाव रोगले लियोनेल आफ्ना साथीहरू भन्दा यति सानो देखिन्थ्यो।
पहिचान गर्न सजिलो छ, डाक्टरहरूले अन्ततः मेस्सी निदान को लागी एक विकास हर्मोन अभाव रोग बाट पीडित को रूप मा। यही कारण थियो कि उसको बृद्धि सीमित थियो। साँच्चै, उसको बुबाले निरन्तर मेडिकल बिलहरूको पूर्ति गर्न गाह्रो थियो। त्यस पछि, जर्ज मेसीको स्वास्थ्य बीमाले दुई वर्षको विकास हर्मोन उपचारको लागि मात्र कभर गर्न सक्थ्यो, जुन प्रतिमहिना $ १,००० खर्च हुन्छ।
समर्थनको लागि, नेवेल योगदान गर्न राजी भए, तर पछि गरीब मेस्सीको लागि उनीहरूको वाचा त्यागे। फुटबलका भगवानले आफ्ना बुवा हजुरबा हजुरआमालाई (बुबाको पक्षबाट) हस्तक्षेप गर्नुभयो जो क्याटालोनियामा बस्थे जसले एफसी बार्सिलोनाको साथ उसको उपचार गर्ने उपाय खोज्यो।
लियोनेल मेसी जीवनी - फेम कहानी कहानी:
उनको रोगको उपचार गर्न मद्दतको लागि क्लब खोज्ने तिनीहरूको प्रयास, लियोनेल मेसीको बुवा-बुवा हजुरआमा - युसेबियो मेस्सी र रोजा मारिया पेरेज - एफसी बार्सिलोनाको व्यवस्थापनका एक प्रमुख सदस्यलाई विश्वस्त पार्ने भाग्य थिए।
१ 13 वर्षको उमेरमा, एफसी बार्काले मेस्सीलाई उनको मेडिकल बिल क्लबले कभर गर्ने मौका दिए। यो पछि युसेबियो र रोजाले आफ्नो नाति कथाहरू सुनाए पछि आए जोसँग अर्जेन्टिनी फुटबलरसँग उस्तै प्रतिभा छ। डिएगो मराडोना.
सुरुमा, यो एफसी बार्काको टोली निर्देशक चार्ली रेक्साच थियो, जसले चाँडै उसलाई हस्ताक्षर गर्न धकेला। दुःखको कुरा, बार्सिलोना निर्देशकहरूको बोर्डले अस्वीकार गर्‍यो। तपाईं त्यस समयमा, फुटबल नियमहरूले यूरोपीयन क्लबहरूलाई लिओको उमेरको विदेशी खेलाडीहरूमा हस्ताक्षर गर्न अनुमति दिनुभएन।
लियोनेल मेस्सी नैपकिन सम्झौताको कथा:
१ December डिसेम्बर २००० मा, नेवेल ओल्ड ब्वाइजेले बार्सिलोनाको मेस्सी प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्नको लागि अल्टिमेटम जारी गरे वा उनलाई गुमाउने मौका खडा गरे। त्यस खराब दिनको दिन, कार्ल रेक्साच - अन्तिम म्याद पूरा गर्न हतार गर्दा र कागजात नभएकोले लिओनेल मेस्सीलाई नैपकिनमा हस्ताक्षर गरे।
यस व्यक्तिले लिओनेल मेस्सीमा हस्ताक्षर गर्ने क्लबको इच्छाको विपरित गएर इतिहास बनायो। त्यसो गर्न रुमाल प्रयोग गर्नु भनेको अनमोल हो।
स्पेनमा प्रारम्भिक जीवन:
फेब्रुअरी २००१ मा, लियोनेल मेस्सीको परिवारले उनीहरूका झोलाहरू उठाए र एट्लान्टिक पार गरेर स्पेनमा एउटा नयाँ घर बनाउन सरे। सम्पूर्ण घर शिविर नौउ नजिकैको एउटा अपार्टमेन्टमा बस्थे।
दुर्भाग्यवश, लिओनेल मेस्सी - आफ्नो पहिलो वर्ष मा - शायद विरलै आफ्नो एफसी बार्का एकेडेमी साथीहरु संग खेले नीलको ओल्ड ब्वाईज र क्याटालोनिया क्लब बीचको ट्रान्सफर संघर्षको कारण।
वास्तवमा, लियोलाई केवल फ्रेंडली खेल्न र क्याटालान लिगमा मात्र अनुमति थियो। धेरै फुटबल बिना, गरीब केटा एकीकृत गर्न संघर्ष गरे। कुरालाई नराम्रो बनाउनको लागि, उहाँ अझ बढी आरक्षित हुनुभयो - कुरा गर्न पटक्कै राजी हुनुहुन्न। लियोनेल यति शान्त थिए कि उनका साथीहरूले सुरुमा विश्वास गरे कि उनी लाटा हो।
Homesickness र पुन: एकीकरण:
लियोनेल मेस्सीका परिवारका सदस्यहरू बाहेक उनका बुबाले स्पेनमा सीमित बसोबास गरे। समय बित्दै जाँदा ती केटा घरधनीबाट पीडित हुन थाले। यो बिरामी आमाको रोड्रिगो, मटियास र मारिया सोलको साथ रोजारियो फर्किए पछि यो बिरामी भयो। गरीब लियो आफ्ना बुबा र अन्य टाढाका आफन्तहरूसँग बार्सिलोनामै बस्यो।
लियोनेल हेर्नुहोस् ... फुटबल को भगवान माग्दै; तपाईं कहिले मेरो सहायता गर्न आउनुहुनेछ?
ला मासिया (बार्का युवा एकेडेमी) सँग राम्रो फुटबल खेल्नको लागि एक वर्ष प्रतिक्षा गरेपछि, मेस्सीले फेब्रुअरी २००२ मा रोयल स्पेनिश फुटबल महासंघ (आरएफईएफ) मा भर्ना गर्न ठीक भयो।
तिनीहरूका सबै प्रतिस्पर्धामा खेल्दै, उनले आफ्ना साथी साथीहरूसित मित्रता गाँसे, जसमध्येका थिए Cesc Fabregas र Gerard Piqué.
के तपाईंलाई थाहा छ?… यी तीनजना केटाहरू उनीहरूको प्रारम्भिक बार्का दिनहरूमा सब भन्दा राम्रा साथीहरू थिए।
चिकित्सा उपचार, सर्वश्रेष्ठ मित्रहरू र ओलम्पिक विजयको लागि विदाई:
१ growth बर्षमा उनको बृद्धि हार्मोन उपचार पूरा गर्दै, उनी बार्सिलोनाको बेबी ड्रीम टीमको अभिन्न अंग भए। यो पक्ष बार्काको सबैभन्दा महान युवाको रूपमा लेबल गरिएको थियो।
त्यस समयमा मेस्सीले लगातार खेल सुरु गर्यो, उनले आर्सेनलमा सम्मिलित हुने प्रस्ताव प्राप्त गरे। उसको साथी - Cesc Fabregas - गनर्समा सामेल हुन गयो। Garard Piqué चाँडै म्यान युनाइटेडको लागि प्रस्थान गरियो। लियोनेलले बार्सिलोनामै बस्नको लागि छाड्नु अस्वीकार गरे।
लिओले फिफा वर्ल्ड युवा च्याम्पियनशिपको दौडान २०० during मा विश्वकै आफ्नो नामको घोषणा गर्‍यो। उनले गोल्डन बल, गोल्डन जुत्ता, र ओलम्पिक स्वर्ण पदकको साथ टूर्नामेन्ट समाप्त गरे।
लियोनेल मेसी जीवनी- सफलता कहानी:
बार्कासँगै फर्किएपछि, उसले क्लबको क्रममा छिटो प्रगति गर्यो - फ्रान्क रिजकार्डको आँखा समाते, जसले उसलाई क्लबको वरिष्ठ टोलीसँग स्थिर बनायो। ठूला केटाहरू संग पहिलो प्रशिक्षण सत्र पछि, रोनाल्डिन्हो चाँडै नै मेस्सीको मित्रता भयो।
ब्राजिलियन फुटबल लीजेन्डले उनलाई "सानो भाई" भन्ने तथ्यले पहिलो टीममा लिओनेलको संक्रमणलाई सहज बनायो जसमा उल्लेख्य खेलाडीहरू थिए। शमूएल इटो.
के तपाईंलाई थाहा थियो?… लियोनेलले एफसी बार्सिलोनाको पहिलो टीमसँग मैत्रीपूर्ण मैदानमा डेब्यू गरे जोसे मोरिन्हो पोर्टो। खेलमा प्रभावशाली प्रदर्शनले उहाँलाई खेल लेखक र फ्यानहरू द्वारा सकारात्मक रेटिंग जित्यो। त्यस समयदेखि, लियोसँग धेरै सफल asonsतुहरू छन्, एउटा त्यस्तो उपलब्धि जसले उनलाई ब्लाग्राउनका लागि 34 XNUMX भन्दा बढी ट्राफीहरू ल्यायो।
उनको ख्याति बढ्नुभएदेखि, फुटबल फुटबल दिग्गज वर्ल्ड प्लेयर अफ द ईयर पुरस्कार जितेको छ - एक रेकर्ड छ पटक। किनभने लियोनेलले यति धेरै गरेका छन - धेरै धेरै जादुगरी पलहरू उत्पादन गरेका छन - धेरै ट्राफीहरू जितेका थिए, धेरै गोल गरेका थिए, अब उनी फुटबलको GOAT भनेर चिनिन्छन्।
सत्य बोल्न, लियोनेल मेसी मात्र असम्भव छ प्रतिस्थापन गर्न। बाँकी, हामी भन्छौं, फुटबल कथा को, सधैं इतिहास हुनेछ।
लियोनेल मेसी प्रेम कहानी एन्टोनिला रोक्कुजो संग:
बाल्यकालको प्यारी अवधारणाबाट प्रेरित, अर्जेन्टिनासँग उनको सम्बन्ध जीवनको बारेमा अविश्वसनीय कथा छ। १ 1990 XNUMX ० को दशकमा - उनको गृहनगर रोजारियोमा - लियो स्वाभाविक रूपमा एन्टोनिला रोक्कुजो लागि अविभाज्य भयो। यो सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई उनीहरूले कसरी प्रेम फेला पारे बताउनेछौं।
दुबै प्रेमीहरू एक जना केटाबाट भेट्छन्, अर्जेन्टिनाको बाल्यकालको साथी लुकास स्क्याग्लिया। उनी एन्टोनेला रोक्कुजो काकाका भतिजा हुन्। लुकास स्क्याग्लिया (अब एक फुटबलर) लियोको साथ उही उमेरमा छ। त्यसबेला, केटाहरूले रोसारियो बीचमा खेल्न रमाईलो पाए।
यस्तै एउटा बचपनको मनोरञ्जन दिनको बेला - ठीक १ 1992 XNUMX २ मा - लियोनेलले आफ्नो भावी पत्नी भेट्टाए। त्यस क्षणदेखि एन्टोनेला रोक्कुजो र लियोले एकअर्काको साथ हुने वचन दिएका थिए - जस्तो उनीहरू सानो भए पनि। हामीसँग यहाँ छ, एक प्रारम्भिक प्रमाण - सम्भवतः - दुबै मिलेको दिनमा।
केवल दुई प्रेम चरा हेर्नुहोस्। तिनीहरूको गन्तव्यहरू पहिले नै लेखिएको थियो।
भेटघाटको पहिलो दिन, मेस्सीले आफ्नो साथी लुकास स्क्याग्लियालाई सोधे: “त्यो को हो?”। उसले उत्तर दियो ... "उनी मेरा सानी बहिनी हुन्!" लियोले पछि (नौ वर्षको उमेरमा) आठ वर्षको एन्टोनेलालाई एक प्रेम पत्र लेख्यो जसमा उनले उद्गार गरे:
"एक दिन, तपाईं र म ब्वाईफ्राइन्ड र जेलफ्रेंड हुनेछौं।"
लियोनेल मेस्सीसँग विवाह हुनु अघि एन्टोनेला रोक्कुजको प्रेमी
फुटबल फ्यानहरूले उनी र मेस्सी कुल बचपनका प्रियहरू विश्वास गर्छन्। सत्य कुरा यो हो कि यो थिएन। दूरीले एक पटक तिनीहरूको सम्बन्ध बिगार्‍यो। यदि तपाइँलाई थाहा थिएन, लिओनेल मेस्सीकी श्रीमती एन्टोनेला रोक्को अर्को अर्को केटासँग मुछिए।
यो स्पेनमा उनको विकास हर्मोन अभाव रोग संग अर्जेन्टिनाको लड़ाई को गर्मी को समयमा भयो। यो एक समय थियो जब लिओनेल मेस्सीको परिवारले रोसारियोलाई स्पेनमा छाडे र उनको रोगको उपचार गर्न एफसी बार्काका लागि खेलिरहेका थिए।
त्यो समयमा, लियो र एन्टोनिला बिच्छेदन भयो। पछि उनको मान्छेलाई देखेर आशा छोडे पछि यो भयो। एन्टोनेला रोक्कुजो सरे र यस केटोलाई डेटि began गर्न थाले जुन तपाईंले यहाँ देख्नुभयो।
तिनीहरूको अनुहार हेर्नुहोस्। तपाईं भन्न सक्नुहुनेछ कि मेस्सीकी पत्नी आफ्नो भूतपूर्व प्रेमीसँग साँच्चिकै माया गर्छिन्।
लियोका बाबुआमाले उनलाई स्पेनमा लगेको सात बर्ष पछि उसले आफ्नो बिर्सेकी प्रेमिकासम्म पुग्ने निर्णय गर्यो। सत्य कुरा के हो भने, मेस्सी र एन्टोनेलाको सम्बन्ध २०० in मा मात्र गम्भीर भयो। त्यस समयमा उनले आफ्नो प्रेमी - एक गरिब केटालाई छाडिदिए - जसले उनका शब्दहरू समात्न इन्कार गरे।
के तपाईंलाई थाहा थियो?… एन्टोनलाको पूर्व प्रेमीले उसको भित्री ब्रेकलाई भद्रताका साथ व्यवहार गर्‍यो। उनले स्थानीय अर्जेन्टिना अखबारमा भनेका शब्दहरूमा;
"एन्टोनेला रसकुजोले मलाई डुबायो, तर अन्ततः उनले कुनै पनि पुरानो ब्लाकको लागि मलाई छोड्ने छैन। म खुशी छु उनले मलाई लाओनेल मेसीबाहेक अरू कसैलाई भेट्न ...
ला पुल्गाले फेरि गर्लफ्रेन्ड दावी गर्‍यो र दुई बर्ष पछि उसले आफ्नो रोमान्स सार्वजनिक गर्‍यो। तीन वर्ष पछि, मेस्सी र एन्टोनेला दुबै पति-पत्नी बन्न सहमत भए।
June० जून २०१, मा, उनीहरूले रोजारियोको एक लक्जरी होटलमा विवाह गरे जसका आमा बुबा र दुबै प्रेमीका परिवार सदस्यहरू थिए - करीव २ 30० पाहुनाहरू - त्यसमा भाग लिइरहेका थिए।
लियोको विवाह समारोह।
जब म लिओनेल मेस्सीको बायो सिर्जना गर्छु, उसका तीन छोराहरू छन्। थाआगो मेसी (नोभेम्बर २०१२ को जन्म २ तारिख), मातेओ मेसी (जन्म १ September सेप्टेम्बर २०१)) र सिरो मेसी (जन्म १० मार्च २०१ 2)। तपाईं तल के देख्नुहुन्छ त्यसको आधारमा, तपाईं मसँग सहमत हुनुहुन्छ उहाँ एक परिवारका मानिस हुनुहुन्छ।
विश्वका लागि, उहाँ एक फुटबल नायक हुनुहुन्छ। आफ्नो परिवारको लागि, त्यो संसारको अर्थ हो।
लियोनेल मेसी निजी जीवन:
GOAT एक अति संवेदनशील व्यक्ति हो जसले हल्लालाई घृणा गर्दछ। ऊ त्यस्तो प्रकार हो जसले मौनताको शक्तिलाई महत्व दिँदछ, विशेष गरी उसको घरमा। यसका लागि, लियोनेल एक बार्सिलोना गाउँमा जंगल क्षेत्र भित्र बस्न रुचाउँछन् - व्यस्त शहर केन्द्रबाट केही टाढा। आवाजलाई हराउन, उसले आफ्नो छिमेकीको सबै घरहरू किने - त्यो एक पूर्वकर्मीद्वारा गरिएको थियो इवान रकीती.
अर्जेन्टिनालाई फुटबलबाट टाढा जान्ने।
के तपाईंलाई थाहा छ? ... हवाईजहाजलाई समेत लिओनेल मेस्सीको घर उडान गर्न अनुमति छैन - यस्तो चीज जुन संसारमा कहिँ पनि हुँदैन।
अनुसार AS फुटबल, मेस्सीले एक पटक बार्सिलोना-एल प्रान्त एयरपोर्टको बिरूद्ध मुद्दा उठाए। यसको परिणामस्वरूप उनीहरूको रनवेको विचलन भयो जसले गर्दा जहाजको आवाजले उसको सियस्टामा अवरोध नहोस्।
पिचमा उसको गतिविधिबाट टाढा, लियो एक मायालु बुबा र राम्रो पति हो। ऊ आफ्नो परिवार र कुकुरको साथ आफ्नो हवेलीमा - एक तलको जीवन बिताउन रुचि गर्नेहरूको को कोटी हो।
जहाँसम्म हामीलाई थाहा छ, अर्जेन्टिनीले आफ्ना पैसाहरू ठूला घरहरू निर्माण गर्न र अटोमोबाइलहरू खरीद गर्न प्रयोग गर्दछ। उनीसँग धेरै कारहरू छन् र ती मध्ये उल्लेखनीय अडी क्यू ((€ m मी।
लियोनेल मेसी पारिवारिक जीवन:
आफ्नो प्रख्यातमा पनि, अर्जेन्टिनाले आफ्नो गृहनगर रोजारियोसँग घनिष्ट सम्बन्ध राख्दछ - उनीहरूको उच्चारण पनि सुरक्षित गर्दै। लियोनेलले उसको परिवारको पुराना घरहरूको स्वामित्व राख्यो, तिमी उनीहरू थाकिसकेका छौ। यो उसको नम्र शुरुआतको प्रमाण हो। यहाँ हामी उसका बाबुआमा र विस्तारित घर परिवारको बारेमा तथ्य पत्ता लगाउँछौं।
यो एउटा परिवार हो जुन एक घर बाहिर विस्तार गर्दछ।
लियोनेल मेसीको बुबाको बारेमा:
जर्ज होरिएसिओ मेस्सीका नामले परिचित, उनले लिओनेल मेस्सीको बाल्यकालमा स्टिल कारखानामा प्रबन्धकको रूपमा काम गरे। एक दूरदर्शी मानिस को रूप मा, उनले आफ्नो छोरा कोचिंग सुरु गर्न आफ्नो जागिर छोडे - जब लियो चार वर्षको थिए। यो स्थानीय फुटबल क्लब, ग्रान्डोलीमा भयो।
जर्ज होरिसियो आफ्नो छोरासँग बाक्लो र पातलो हुँदै गएको छ। आजको दिन, उनी आफ्नो एजेन्टका रूपमा सेवा गर्दछन्, जुन भूमिका उसले दशकौं भरीरहेको छ। उनी आफ्नो छोरालाई सल्लाह दिनमा मस्तिष्क थिए बार्सिलोना मा रहन कानूनी विवाद aviod। यो क्लबको साथ लिओनेलको सम्बन्ध पछि आए पछि बढ्यो पछि यो भयो रोनाल्ड कोमेन.
अहिले सम्म धेरै राम्रो छ, जोर्गे Horácio सफलतापूर्वक आफ्नो छोराको साम्राज्य को प्रबंधन छ। यो कुरा पनि ध्यान दिनुहोस्, लियोनेल मेसीको बुबा सम्बन्धविच्छेद हो - जसको अर्थ उहाँ अब आफ्नी स्वास्नी सेलिया कुचिटिनीसँग हुनुहुन्न।
लियोनेल मेसीको आमाको बारेमा:
अक्सर सेलिआ मारिया कुचिटिनी भनेर चिनिने, उनले एक पटक पार्टटाइम क्लीनरको रूपमा काम गरिन्। आजकल, उनले आफ्नो छोराको व्यक्तिगत मामिलाहरू र मेसी प्रेम संस्थाको प्रबन्ध गर्दछन्। लियो आफ्नो आमासँग घनिष्ठ सम्बन्धको आनन्द लिन्छ, जसको अनुहार उसले आफ्नो देब्रे काँधमा ट्याटु गरेको छ।
लियोनेल मेसीको आमाको विवाद:
सेलिआ मारियाले एक पटक आफ्नो छोराको सेतो लुगा लगाएर विवाहको बन्धनमा परेर झगडा गर्‍यो। यसले उनलाई उसकी बुहारी आन्टोनेला रोक्कुजोसँग मिल्दो देखिन। अर्जेन्टिनाको संस्कृति अनुसार विवाह समारोहमा दुलही बाहेक अरू कसैलाई सेतो लगाउनु असाध्यै आपत्तिजनक छ।
जे होस्, कार्यक्रममा निर्माणमा पास गरिएको जानकारीले उनको लुगा "अँध्यारो" हुनु पर्छ भनेर देखाउँदछ। यसको बाबजुद पनि उनले अर्जेन्टिनी परम्परालाई इन्कार गरे सेलियाको कार्यले एन्टोनेला रोक्कुजो र लियोको परिवारलाई बोल्ने शर्तमा नबनाएको थियो।
लियोनेल मेसी भाईको बारेमा - रोड्रिगो मेसी:
फेब्रुअरी १ ​​10 .० को १० औं दिनमा जन्मनुभएको, उहाँ जेठो दाइ-बहिनी हुनुहुन्छ - बार्का पौराणिक कथा भन्दा than वर्ष जेठो। उसको नजिकको परिवारका अन्य सदस्यहरू जस्तै, रोड्रिगो लिओनेलको व्यवसायिक व्यवसायको केही पक्षहरू प्रबन्ध गर्न धेरै सक्रिय छन्। उसले मेस्सीको दैनिक तालिका र प्रचारको काम गर्छ।
लियोनेल मेसीको भाईको बारेमा - मटियास:
फेब्रुअरी १ ​​10 .० को १० औं दिनमा जन्मेका, उनी परिवारका दोस्रो ठूला दाजुभाइ हुन्। लियोनेलकी आमा सेलिया मारियाले जस्तै मटियासले आफ्नो भाइको जग बसाल्न सहयोग गर्दछ।
दुर्भाग्यवस, उहाँ एक पटक नकारात्मक कारणको लागि समाचारमा आउनुभएको छ। २०१ 2016 मा, मटियासले अवैध रूपमा बन्दुक राख्ने अपराध गरे। सजायको रूपमा, अधिकारीहरूले उनलाई एक पूरै बर्ष उनको आफ्नै शहर मा फुटबल कक्षा पढाउन आदेश दिए।
लियोनेल मेसीको बहिनीको बारेमा - मारिया सोल:
धेरैलाई थाहा थिएन, उनी परिवारकी एकमात्र महिला र बच्चा हुन्। मारिया सोल मेसीलाई उनको ठूला भाइहरूले रानीको रूपमा व्यवहार गरिन्। रिपोर्टका अनुसार उनले लिओनेल नृत्य कहिल्यै देखेका छैनन् जबसम्म उनले उनको पन्ध्रौं जन्मदिन भोजमा उनको शरीरलाई हल्लाउन नपाए। मारिया सोल उनको भाइको स्टोरको व्यवस्थापन गर्दछ।
लियोनेल मेसी का काका, काकी र नेफ्यूहरू:
२०११ मा डायरी सेग्रेले गरेको वंशावली अनुसन्धानले उनी चौथो भतिजा भएको कुरा पत्ता लगायो। यो उनको पूर्व टीमका साथी हो, Bojan Krkić। मेस्सीका अन्य आफन्तहरू (सगेभाउहरू) मा इमानुएल बियानुकाची र म्याक्सी बियानुकाची पर्छन्।
पढ्नुहोस् कार्लोस Tevez बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
थप रूपमा, लियोनेल मेसीको आन्ट्समा मार्सेला कुचिटिनी बियानचीचि, ग्लेडिस मेसी, र सुसान्ना मेसी शामिल छन्। उसको भतिजा; अगस्टिन मेसी, मुरैना मेसी, बेन्जामिन मेसी र थॉमस मेसी।
लियोनेल मेसी हजुरबा हजुरआमा:
पैतृक पक्ष बाट, ती समावेश गर्दछ; रोजा मारिया पेरेज (पैतृक ग्रान्डमम) र युसेबियो मेस्सी पैतृक ग्रान्ड। मातृ पक्षबाट, तिनीहरू निम्न अनुसार छन्; (१) एन्टोनियो कुकिट्टिनी (मातृ ग्रान्ड) र (२) सेलिआ ओलिभियरा कुचिट्टिनी (मातृ ग्रान्डम)।
लियोनेल मेसी महान हजुरबा हजुरआमा:
जोस पेरेज सोले आफ्नो आमाको पक्षबाट महान हजुरआमा हुन्। अर्कोतर्फ, एनिसेटो मेसी लिओनेलका ठूला हजुरआमा हुन् जो युसेबियो मेस्सी (जोर्गे मेस्सीका बुबा) हुन्। एनिसिकोले रोजा पेरेजसँग विवाह गर्यो, जो लियोनेलको महान हजुरआमा हो।
लियोनेल मेसी अनटोल्ड तथ्यहरू:
यस संस्मरणलाई समेट्दै, हामी तपाईंलाई केही सत्य प्रकट गर्नेछौं जुन तपाईंलाई प्लेमेकरको पूर्ण चित्र समात्न मद्दत गर्दछ।
अर्जेन्टिना पेसो ($) मा आय
प्रति वर्ष: € 25,429,200 $ 31,235,958 $ 2,585,041,013 £ 23,343,515
प्रति महिना: € 2,452,100 $ 3,012,037 $ 249,271,666 £ 2,452,100
प्रति हप्ता: € 565,000 $ 694,018 $ 57,435,868 £ 518,659
प्रति दिन: € 80,714 $ 99,145 $ 8,205,095 £ 74,093
प्रति घण्टा: € 3,363 $ 4,131 $ 341,870 £ 3,087
प्रति मिनेट: € 56 $ 69 $ 5,693 £ 51
प्रति सेकेन्ड: € 0.93 $ 1.15 $ 93.9 £ 0.85
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो लियोनेल मेसीको बायो, यो उसले कमाएको हो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… औसत स्पेनी नागरिकले वर्षमा २ .,००० डलर कमाउने मेसिडोनाको दैनिक तलब बनाउन तीन बर्ष र छ महिना काम गर्नुपर्नेछ।
तथ्य # १: लियोनेल मेसीको ट्याटूको अर्थ:
आणविक फ्लीमा सात शरीर कला भन्दा कम छ। बायाँ काँधमा ब्लेडबाट शुरू गर्नु उनको मायालु आमा सेलियाको ट्याटू हो। आफ्नो पाखुरामा लोटसको फूल ट्याटुले धितोको कथालाई चिन्ताको विषय बनाउँदछ। यसले तपाईलाई भन्छ कि फूल बढ्ने बित्तिकै प्रतिभा कहिँ पनि बढ्न सक्छ।
मेस्सीको देब्रे खुट्टामा उसको छोरोको थयवा छ - थिआगोको हातहरू, साथै उसको बाछोमा पहिलो जन्मेको बच्चाको नाम। यो पनि १० नम्बरमा छ - जुन ऊ लगाउँछ। उसको दायाँ खुट्टा - खुट्टाको टुप्पोमा - उसका तीनै छोराहरूको नाम र जन्म-मितिहरू: थियागो, माटेओ र सिरो।
तथ्य # १: लियोनेल मेसीको धर्म:
काँधको शीर्षमा काँडाको मुकुटमा येशू ख्रीष्टको ट्याटू छ। यो उनको धार्मिक विश्वासको चिन्ह हो। यसको मतलब यो हो कि उनका आमाबुबाले उनलाई एक इसाईको रूपमा हुर्काए र उनले इसाई धर्मको अभ्यास गरे।
तथ्य # १: लियोनेल मेसी उपनामहरु को बारे मा:
२०० 2007 कोपा डेल रे सेमीफाइनलमा गेटाफको बिरूद्ध उसको आश्चर्यजनक गोल पछि फ्यानहरूले उनलाई मेसिदोना भन्ने नाम लिन थाले। लक्ष्यमा ढिलो जोसँग समानता छ डिएगो मराडोना १ 1986 XNUMX वर्ल्ड कपमा इ England्ल्यान्डविरुद्ध गोल।
अर्कोतर्फ, प्रशंसकहरूले उसलाई "ला पुल्गा" उपनाम दिए। यो एक स्पेनिश शब्द हो जसले "फ्ल्या" को रूपमा अनुवाद गर्दछ। उसको छोटो कदको कारण, फ्यानहरूले उहाँलाई एक पिस्सूको रूपमा देख्दछ जसले डिफेंडरहरूलाई सताउने बाहेक अरू केही गर्दैन। आजका दिन उनी "GOAT" लाई मन पराउँछन्। यो एक परिवर्णी शब्द हो जुन महान समयको महान अनुवाद गर्दछ।
फेरी, उसको छोटो कदको कारण, मेस्सीको उपनाम छ - ला पुल्गा एटमिया। यो किनभने गुरुत्वाकर्षणको उसको तल्लो केन्द्र छ, जसले उसलाई अधिक चाँडो दिशा बदल्छ र विपक्षीहरूबाट टाढा बचाउँछ।
तथ्य # १: लियोनेल मेसीको कुकुरको बारेमा:
सन् २०१ 2016 मा एन्टोनेला रोक्कुजोले हल्कलाई उनका पतिका लागि उपहारको रूपमा किन्न्। लियोनेल मेस्सीको कुकुर बोर्डो मास्टिफ कुकुर जातको हो जुन तिनीहरूको आकार र शक्तिका लागि परिचित छ। तीन बर्ष भित्र, हल्क एक विशाल, स्टक, मांसपेशि पाल्तु जनावर भयो।
तथ्य # १: लियोनेल मेसीको कमजोरी:
लगभग सबै गुणहरु को लागी परिचित, फुटबल को GOAT सही छैन। लियोको क्यारियर भर, आक्रामकता र अवरोध उसको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ।
फुटबलको र्‍याग टु रिच कथाहरू हाम्रो जस्तो कोही छैन जो सुन्न चाहन्छ जबसम्म यो अन्त्य हुदैन। लियोनेल मेसीको जीवनीले हामीलाई सिकाउँछ कि हामी कहिल्यै बिस्तारै बढ्न डराउनु हुँदैन। अझ बढि, कसलाई स्वाभाविक रूपमा आशिष् दिइन्छ धन्यका हुन् र यसको प्रोफाइल लियोनेल एन्ड्रेस मेसी कुचीतिनी उनको प्राकृतिक आशिष को बारे मा धेरै कुरा गर्दछ।
जबकि हामी धेरैले स of्कटको समयमा आशा त्यागेका छौं, लियोनेल मेसीले कहिले गरेनन। उनले विकल्पको रूपमा आफ्नो क्यारियरको अन्त देखेनन् - जुन समयमा उनी हार्मोन अभाव रोगको विकास हो। धन्यबाद, लियोनेल मेस्सीको परिवार, विशेष गरी उनका बुवा (जर्ज होरसियो) कम्पास बने जसले उनलाई निर्देशित गरे।
उनका बुबाआमा उभिए र उहाँसँग झगडा गर्दा लियोका आफन्तहरू उनको लागि स्पेनमा अवसर खोज्न बाहिर निस्के। परिवारमा फुटबलको अग्रगामीको रूपमा, आफ्ना जेठा दाइहरू (रोड्रिगो र मटियास) लाई छोडिएन। उनीहरू उनका पहिलो फुटबल सुपर हीरो थिए।
अन्य जागिरका लागि योग्य भए पनि दुबै बहिनी (मारिया सोल) र आमा (सेल्या मारिया कुचिट्टिनी) अझै साम्राज्यलाई सहयोग पुर्‍याउन जिन्दगीमा थुनिए। पछिल्लो तर कमसेकम उनको स्वास्नी (एन्टोनेला रोक्कुजो) ले उनलाई थाआगो, माटेओ र सीरो दिए उनको आत्मालाई निको पार्न। नबिर्सनुहोस्, उनले उसलाई कुकुर पनि दिइन्; ठूलो हल्क।
यस लामो संस्मरणमा हामीसँग अहिलेसम्म सम्पर्कमा रहनुभएकोमा धन्यवाद। कृपया टिप्पणी अनुभागमा पुग्नुहोस् - यदि तपाइँले केहि देख्नु भयो जुन हाम्रो राइटअपमा ठीक देखिँदैन वा हामीलाई बताउनुहोस् कि तपाइँ लेजेन्डको बारेमा के सोच्नुहुन्छ। लियोनेल मेसीको बायोको संक्षिप्त संस्करण प्राप्त गर्न, हाम्रो विकी तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
पूर्ण नामहरू: लियोनेल एन्ड्रेस मेसी
जन्म मिति: 24 जुन 1987
अभिभावक: सेलिआ मारिया कुचिटिनी (आमा) र जोर्ज मेसी (फादर)।
Siblings: रोड्रिगो मेसी (सबै भन्दा ठूलो भाइ), मटियास मेसी (तत्कालिन एल्डर भाई) र मारिया सोल मेसी (केवल बहिनी)।
मातृ हजुरबा हजुरआमा एन्टोनियो कुकिट्टिनी (मातृ ग्रान्ड) र सेलिया ओलिभिरा कुचिट्टिनी (मातृ ग्रान्डम)
पैतृक हजुरबा हजुरआमा: रोजा मारिया पेरेज (पैतृक ग्रान्डमम) र युसेबियो मेस्सी (मातृ ग्रान्ड)।
महान हजुरबा हजुरआमा: एनिसेटो मेसी (महान हजुरबुबा), जोस पेरेज सोले (ग्रेट ग्रान्ड्याड) र रोजा पेरेज (ग्रेट ग्रान्डमम)।
पत्नी: एन्टोनेला रोक्कुजो।
विवाहको मिति: जुन 30, 2017
पुरुष बच्चाहरू: थाआगो मेस्सी रोक्कुजो (पहिलो छोरा), माटेओ मेसी रोक्कुजो (दोस्रो छोरा) र सिरो मेसी रोक्कुजो (तेस्रो छोरा)।
महिला बच्चाहरु: मेस्सीको कुनै छोरी छैन (जस्तो कि २०२०)।
कानुनमा: जोसेफ रोक्कुजो (फादर इन्लाव), प्याट्रसिया रोक्कुजो (आमा इन्ला), पाउला रोक्कुजो (बहिनी इन्लाव), कार्ला रोक्जुभो (बहिनी इन्लाव)।
भतिजीहरू: इमानुएल बियानुकाची र मक्सी बियानुकी।
काकीहरू: मार्सेला कुचिट्टिनी बियानुकाची, ग्लेडिस मेस्सी र सुसान्ना मेसी।
नेफ्यू: अगस्टिन मेसी, मुरैना मेसी, बेन्जामिन मेसी र थॉमस मेसी।
कुल मूल्य: 309 400 मिलियन ($ 2021m) - वर्ष २०२१ तथ्या .्क।
उचाइ: 72 किलो
मीटरमा उचाई: 1.7 मीटर।
खुट्टामा उचाई: Feet 5.57 फिट
शिक्षा: लास हेरास (एलेमेनेरी स्कूल)। कलेज छैन।
बचपन आइडल: पाब्लो एमर।
लियोनेल मस्सी संसारको सबैभन्दा राम्रो फुटबलर हो। म पनि lionel messi को एक प्रशंसक हुँ र उनको जस्तै, किनभने पहिलो प्लेरेन lionel messi हो। तपाईं lionel messi को बारे मा महान पोस्ट साझा। बाडेको मा धन्यवाद